MBOLA NIFETY IHANY
Na dia efa nilaza aza ny fanjakana fa tsy hisy ny fetin'ny fankalazana ny fifampiarahabana nahatratra ny taona, misy amin'ny sampan-draraharaha ao amin'ny fitondrana maro ihany no manao fety.
Sakafo hanimpitoloha mihitsy no nomanina izay manaporofo mihitsy hoe misy ny vola kanefa tsy tena tafapetraka ilay politikan'ny fitsitsiana.
VITSY IREO NIJERY AN’I BLACK M
Zara raha nahazo olona ilay fampisehoan'ilay mpanakanto malaza frantsay Black M tao Mahamasina. Anisan'ireo mpanakanto tena malaza any ivelany sy maneran-tany mihitsy aza izy ity kanefa toa tsy dia nanaitra ho an'ny teto Madagasikara. Efa midika sahady ny tena efa fahasahiranan'ny maro ny zava-mitranga. Folo taona lasa tany mbola nahafeno ny palais des sports avokoa ny artista iraisam-pirenena malaza tonga teto.
FENO NY KAPOAKA
Feno ny kapoakan'ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny minisiteran'ny serasera sy ny kolontsaina. Raha ny fantatra dia hanao fitokonana izy ireo manomboka anio mba ho fanoherana ny fandroahana ireo mpiasa ECD maherin'ny 90 isa. Misy mpanao gazety 20 isa tamin'ireo. Mihevitra ny tenany ho iza loatra ity minisitra Lalatiana ity no hiadivany avokoa ny olon-drehetra ?
Omaly ihany dia efa nahetsiky ny minisiteran'ny serasera sy ny kolontsaina avokoa ireo kaonty miafina amin'ny facebook. Izany dia mba entina hamonoana afo momba ny fikasan'ireo mpiasan'ny minisitera izay hanao hetsika fanoherana ny fandroahana ireo ECD. Nalaina baraka amin'ny tambajotra sosialy ny mpanao gazety malaza miisa roa izay nolazaina fa mpanakorontana. Matahotra mafy ny minisitra, indrindra amin'izao ankatoky ny fanovana governemanta izao.
MIVERINA NY FANAFIHANA MITAM-PIADIANA
Miverina indray ny fanafihana mitam-piadiana eto an-drenivohitra. Tapaka indray ny jiolahy taorian'ny fety ary miverina manao fandrobàna toy ny nitranga tetsy Tanjombato. Efa eo andoham-pandrinan'ny olona ny roalahy mitam-basy vao hita. Lasa tamin'izany ny vola mitentina 20 tapitrisa ariary.
SIDINA ANTANANARIVO – FIANARANTSOA
Hiverina hisokatra manomboka anio ny sidina Antananarivo Fianarantsoa. Efa tena tsy misy toerana ho an'ny fandraharahana malagasy intsony izy ity fa dia ny vondrona sipromad indray no nahazo fitantanana ity zotra ity izay. Ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny Air Madagascar matoa tsy nomena fahatokisana amin'ity zotra ity.